Mpamatsy kojakoja fampiasa amin'ny tariby hafa - Mpanamboatra kojakoja fantsona hafa any Sina
H type compression clamp
clamp ketrona, Clamp fihenjanana
Fitaovana tariby hafa
Voasaraka tariby voarindrina
Clamp fihenjanana plastika
Ireo mpampitohy crimple Powerlink amin'ny fanaovana hazakazaka (conducteur) ary paompy (conducteur) manatevin-daharana conducteur mihazakazaka roa amin'ny fampiharana ambony sy ambanin'ny tany. Manome fitondra-tena ambony indrindra ary mampihena ny mety hitrandrahana. Izy io dia mety amin'ny karazana toetr'andro / fametrahana tsy mampidi-doza.
Misy habeny (faritra ampitana): 16mm2 - 240mm2
Clamp mampifandray varahina
Surface: Voapetaka firavaka
Ny andian-tantara OT dia mety amin'ny fampifandraisan'ny mpampita vy (OT-3A amin'ny OT-1000A) amin'ny tariby herinaratra misy fitaovana elektronika. Vita amin'ny fantsom-by T2 izy ireo ary mihosotra amin'ny vinaingitra na asidra madio. Ny maripanan'ny fiasan'izy ireo dia -55 ℃ ka hatramin'ny 150 ℃.
Tsorakazo mifototra amin'ny tany
Volafotsy, varahina ary varahina
99.95% varahina madio sy vy ambany karbaona Q235
sosona varahina≥0.254 microns
hery mihombo≥570N / mm²
Clamp amin'ny tsorakazo mitotona amin'ny tany
Ny T-clamp dia ampiasaina amin'ny tsipika herinaratra overhead na ny substation, izay itarihan'ny busbar ny sampana ankehitriny amin'ny fomba miendrika T. Ny karazana bolt type sy ny karazana compression, ho an'ny faritra kely amin'ny tariby dia azo ampiasaina ho toy ny clamp tsipika mitovy. na clamp oval mpampitohy toy ny T-karazana fifandraisana
FDY Vibration damper
Clamp Type Vibration Damper ho an'ny tariby ADSS / OPGW, rafitra fitambaran-tsoron'ny Damper Weight, dia nohamarinin'ny China Electric Power Research Institute fa misy refy efatra eo anelanelan'ny 5 ~ 150HZ, ary ny faritra mihozongozona dia lehibe kokoa noho ny FG Damper na FD Damper. Napetraka tamina tariby ADSS ny Dampers Vibration Be dia be.
Fantsona tariby malefaka avo
Ny vokatra dia vita amin'ny alimina alimina manohitra ny corrosive avo lenta mba hiarovana ny fametrahana tariby. Ny firafitry ny fiotazana dia ampidinin'ny bolt. Ny clip tazomina dia mifatotra, mitombina amin'ny fampifanarahana, mora sy malefaka amin'ny fametrahana ary tsy manisy ratsy ny tariby.
Adress: No268, Weishiyi Road, Faritra fampandrosoana ara-toekarena Yueqing, Tanàna Yueqing, Faritanin'i Zhejiang, Sina